comments: စိတ်ဖိစီးမှု, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အချို့သောသဘာဝကဆုလာဘ်နှစ်ဦးစလုံး DeltaFosB တစ်ခုစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်သော်လည်း, စိတ်ဖိစီးမှုကွဲပြားခြားနားသောမြစ်အောက်ပိုင်းဆဲလ်များနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသော receptors နှင့်မျိုးဗီဇမြှင့်လုပ်ဆောင်။ တနည်းအားဖြင့်စွဲလမ်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုမှခုခံအခြေခံကျကျကွဲပြားခြားနားသောယန္တရားများအပေါ်အားကိုး
J ကို neuroscience ။ 2010 အောက်တိုဘာ 27; 30 (43): 14585-92 ။
Vialou V ကို, ဝင်္ငါ Renthal W က, LaPlant QC, Watts EL, Mouzon အီး, Ghose S က, Tamminga, CA, Nestler EJ ။
အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ Fishberg ဦးစီးဌာန, ဆေးပညာသိနာတောင်ပေါ်ကျောင်း, နယူးယောက်, New York က 10029, USA ။
stress- နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင်အာရုံခံအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်အခြေခံမော်လီကျူးယန္တရားများမလုံလောက်မှု, နားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအလိုက်အထိုက်နေတတ်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရတစ်ခုမှာမော်လီကျူးနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုဖြစ်စေတုံ့ပြန်အတွက်ΔFosB, ထိုကြွက်နျူကလိယ accumbens (NAc) တွင်စုပုံတဲ့ကူးယူအချက်တစ်ခု key ကိုဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ T ကသူကဤသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုတွေ့ရခဲသောကျန်ရှိနေသေးခြင်းဖြင့်ΔFosBသော induction ထိန်းချုပ်မှတ်တမ်းယန္တရားများ upstream ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ stress- တစ်ဝတ္ထုအထက်ဖျန်ဖြေသည်အတိုင်း, လှုပ်ရှားမှု-မှီခိုကူးယူအချက်, သွေးရည်ကြည်တုံ့ပြန်မှုအချက် (SRF), ကိုခွဲခြားသတ်မှတ် ဒါပေမယ့်မကင်း- သွေးဆောင်ΔFosB။ SRF နှစ်ဦးစလုံးစိတ်ဓာတ်လူ့လူနာ NAc နှင့်နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့ကြွက်တွေမှာ downregulated ဖြစ်ပါတယ်။ SRF ၏ဤ downregulation ဒဏ်ခံတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပျက်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးဆောင် mutagenesis ၏အသုံးပြုမှုမှတဆင့်ကျနော်တို့ဒဏ်ခံကြွက်များတွင်အများစုဖြစ်ပေါ်ရသောΔFosB၏စိတ်ဖိစီးမှု-mediated သော induction, ဤဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ SRF စကားရပ်အပေါ်မှီခိုကြောင်းပြသ။ ထို့အပွငျ SRF ၏ NAc-သတ်သတ်မှတ်မှတ်မျိုးဗီဇကိုပယ်ဖျက် prodepressant- နှင့် proanxiety ကဲ့သို့ phenotypes အမျိုးမျိုးကိုအားပေးအားမြှောက်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု၏ deleterious သက်ရောက်မှုမှတိရိစ္ဆာန်များကိုပိုမိုထိခိုက်မခံတဲ့ပြန်ဆို။ ဆနျ့ကငျြဘတှငျကြှနျုပျတို့ SRF နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့တုန့်ပြန် NAc အတွက်ΔFosBစုဆောင်းခြင်းအတွက်အခန်းကဏ္ဍတော်မမူကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ထို့အပွငျ SRF ၏ NAc-တိကျတဲ့ခေါက်ထွက်နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲကင်းထိတွေ့လွတ်လပ်သောယန္တရားများမှတဆင့်ΔFosBစုဆောင်းခြင်းနှင့်အမူအကျင့် sensitivity ကိုထိန်းညှိကြောင်းညွှန်ပြ, ကိုကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူတွေအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ပါတယ်။
အဆိုပါနျူကလိယ accumbens (NAc), အဓိကဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှု (Nestler နှင့် Carlezon, 2006; Sesack နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2010) မှတုန့်ပြန် motivationally သက်ဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုကားမောင်းကြောင်းအာရုံခံခြင်းနှင့်သိမြင်သွင်းအားစုပေါင်းစပ်ဘို့အရေးကြီးပါသည်။ အဆိုပါ NAc လည်းမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါနဲ့ဆက်စပ်အပြုအမူမူမမှန်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွအတူ NAc ပစ်မှတ်ထားလူသားများနှင့်ကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက် depression- နှင့်စွဲတူသောအပြုအမူ (Schlaepfer et al သက်သာစေနိုင်ကြောင်းပြခဲ့ပြီး, 2008; ။ ။ Vassoler et al, 2008; Heinz et al, 2009; ။ Kuhn et အယ်လ်။ , 2009) ။
ထပ်ခါတစ်လဲလဲအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှု၏မူးယစ်ဆေးထိတွေ့အလားအလာစွဲခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါများနာတာရှည်အခြေခံ, NAc အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်၏ပြောင်းလဲပုံစံများ induces (Berton et al, 2006; ။ Krishnan et al, 2007; ။ ဝင်္ et al, 2010; ။ Vialou et al ။ , 2010) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ, ထိုကူးယူအချက်ΔFosB, အ fosB ဗီဇတစ်ခု splice ထုတ်ကုန်, ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့တုန့်ပြန် NAc အတွင်းစုဆောင်း (Nestler, 2008; ။ Perrotti et al, 2008; Vialou et al, 2010 ။ ) ။ ΔFosBဟာနာတာရှည်စွဲပြည်နယ်မှအပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေအကူးအပြောင်းလမ်းညွှန်တစ်ဦးအလားအလာမော်လီကျူး switch အဖြစ်အဆိုပြုပြီးပါပြီ (Nestler et al, 1999; ။ McClung et al, 2004; ။ Renthal et al, 2009 ။ ), NAc Enhancer အတွက်၎င်း၏စုဆောင်းခြင်းအဖြစ် အလွဲသုံးစားမှုအများအပြားမူးယစ်ဆေးဖို့ကြိုးတုံ့ပြန်မှု။ ပိုများသောနာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုအောက်ပါ NAc အတွက်ΔFosBသော induction ၏မကြာသေးမီကအခန်းကဏ္ဍ (။ ။ Nikulina et al, 2008; Vialou et al, 2010) elucidated ထားပြီး: ΔFosBစိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုမှတက်ကြွစွာဖြေရှင်းတုံ့ပြန်မှုကိုအားပေးအားမြှောက်ခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်တိုးပွါး။ ΔFosBသော induction တစ်လှုံ့ဆော်မှု-မှီခိုထုံးစံ၌ဖြစ်ပေါ်သော်လည်း, NAc အတွက် drug- နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ΔFosBစုဆောင်းခြင်းများအတွက်တာဝန်ရှိသည့်ယန္တရားများမသိသောရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
သွေးရည်ကြည်တုန့်ပြန်မှုအချက် (SRF) သည် c-fos, fosb, Egr1 နှင့် Arc (Knöll and Nordheim, 2009) အပါအ ၀ င်အမြန်အစောပိုင်းမျိုးရိုးဗီဇများ၏လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှီခိုသည့်ကူးယူမှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများသည် SRF ၏သက်ရှိ ဦး နှောက်အတွင်းရှိ synaptic လုပ်ဆောင်မှုနှင့် circuitry ဖွဲ့စည်းခြင်း၏စည်းမျဉ်းများအပါအဝင်အာရုံခံဆဲလ်များ၏ morphological နှင့် cytoarchitectural ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်သက်ရောက်မှုများကိုပြသခဲ့သည် (Knöll and Nordheim, 2009) ။ ဤတွေ့ရှိချက်များက SRF အားအလွဲသုံးစားမှု (သို့) စိတ်ဖိစီးမှုဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုနာတာရှည်ထိတွေ့မှုနှင့်ဤအခြေအနေများအောက်တွင် regulationFosB induction အပေါ်အလားအလာရှိသောသက်ရောက်မှုများကြောင့်လည်ပတ်မှုအားဖြင့်ပုံမှန်ဖြစ်စေခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။
ဤနေရာတွင် NAc တွင် SRF ၏ထိန်းချုပ်မှုလျှော့ချခြင်းသည် prodepressant နှင့် anxiogenic phenotypes များကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုသည့်တွန်းအားအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ပြပြီးနောက်ဆုံးတွင်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်တိရိစ္ဆာန်၏ထိခိုက်လွယ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။။ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသောတိရိစ္ဆာန်များ၏ NAc တွင် osFosB induction ဆုံးရှုံးမှုအားဖြင့်ဤသက်ရောက်မှုများကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတဆင့်ဖြန်ဖြေပေးသည်။ စိတ်ကျရောဂါလူနာထံမှရရှိသော postmortem NAc တစ်သျှူးအတွင်း SRF နှင့် osFosB စကားရပ်တွင်လေ့လာတွေ့ရှိမှုကျဆင်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်လူ့စိတ်ကျရောဂါနှင့်သက်ဆိုင်မှုကိုထောက်ခံသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ osFosB စုဆောင်းခြင်းကိုထိန်းချုပ်သောဤယန္တရားသည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ နာတာရှည်ကိုကင်းထိတွေ့မှုသည် SRF ၏ဖော်ပြချက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ NAC မှ SRF ဖျက်ခြင်းသည် chronicFosB စုဆောင်းမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ သွေးဆောင်အပြုအမူတွေ။ စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေတွင် SRF နှင့် osFosB တို့အကြားဤဝတ္ထုသည်တစ် ဦး ချင်း၏နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုအပေါ်အာရုံခံစားမှုကိုထိန်းညှိပေးသည့်အရေးကြီးသော homeostatic ယန္တရားကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။
ရှစ်ပတ်ကြာအရွယ် C57BL / 6J အထီးကြွက် (Jackson ကဓါတ်ခွဲခန်း) အားလုံးအမူအကျင့်များနှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးစမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များစမ်းသပ်ထိန်းသိမ်းရေးမတိုင်မီအနည်းဆုံး 1 တစ်ပတ်တိရစ္ဆာန်စက်ရုံမှ habituated ခဲ့ကြသည်နှင့် 23 ဇအလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာအပေါ် 25-12 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည် (7 ကနေအပေါ်ထွန်း: 00 မှ7လေး: 00 pm တွင်) ကြော်ငြာ libitum နှင့်အတူ အစားအစာနှင့်ရေရရှိမှု။ စမ်းသပ်ချက်အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆေးပညာသိနာတောင်ပေါ်ကျောင်းမှာအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
ကိုကင်းစမ်းသပ်ချက် [အနောက်တိုင်းချေနှင့်အရေအတွက် chromatin immunoprecipitative (chip)] အဘို့, 8-ရက်သတ္တပတ်အရွယ်အထီး C10BL / 57J ကြွက်မှ 6- အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များဆားသို့မဟုတ်ကင်းဖြစ်စေမခုနစ်နေ့စဉ် intraperitoneal ထိုး (; Sigma 20 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း-HCl) ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကြွက်နောက်ဆုံးကုသမှုပြီးနောက် 24 ဇအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အမူအကျင့်စမ်းသပ်ချက်အဘို့, ကြွက် singly postsurgery သျောခဲ့ကြသည်နှင့်အ 10 mg / kg (locomotor ာင်း) သို့မဟုတ် 7.5 နဲ့ကုသခံခဲ့ရသည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, intraperitoneally / ကီလိုဂရမ် (အေးစက်သောအရပ် preference ကို) ကိုကင်း-HCl MG ။
Srffl / FL ကြွက် (Ramanan et al ။ , 2005) ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်။ Srf ၏ NAc-တိကျတဲ့ခေါက်ထွက် stereotaxic ဆေးထိုးခြင်းနှင့် adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ် (AAV) virus သယ်ဆောင်သုံးပြီးအစိမ်းရောင်ချောင်းပရိုတိန်း (GFP) မှ fused Cre recombinase ၏နောက်ဆက်တွဲဗိုင်းရပ်စ် overexpression (Cre) မှတဆင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးက nonself-မဖျက်ပစ် Cre အသုံးပြုခဲ့သည်။ AAV-GFP တစ်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ် Srffl / FL ကြွက်တွေမှာ AAV-Cre-GFP ၏အရပျ၌ထိုးသွင်းခံခဲ့ရသည်။ အတိုချုပ်, ကြွက်တစ်ဦး ketamine ၏အရောအနှော (10 / ကီလိုဂရမ် mg) နှင့် xylazine သုံးပြီး anesthetized ခဲ့ကြသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပေးပို့များအတွက်အသုံးပြုသည်အောက်ပါ stereotaxic သြဒီနိတ်နှင့်အတူ, (10 / ကီလိုဂရမ် Mg): + 1.6 (anterior / posterior) + 1.5 (lateral), - (bregma မှဆွေမျိုး) ကို midline ထံမှ 4.4 °တစ်ခုထောင့်မှာ 10 (dorsal / ventral) ။ သန့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ 0.5 μlစုစုပေါင်းငြိမ်ဝပ်စွာနေရသော5မိလိုက်, တစ်ဦး 0.1 မိကာလ (5 μl / မိနစ်) ကျော်မြန်မာနိုင်ငံသကိုအပ်ခဲ့သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်စကားရပ်လုပျသငျ, အဗိုင်းရပ်စ်ဆေးထိုးက်ဘ်ဆိုက်များစံ histological နည်းလမ်းများသုံးပြီးအားလုံးတိရစ္ဆာန်များအဘို့ကိုအတည်ပြုခဲ့ကြသည်သည့်အခါကြွက်, ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက်2ရက်သတ္တပတ်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်-mediated Cre စကားရပ်၏ထိရောက်မှု immunohistochemistry အားဖြင့်၎င်း, Srf များအတွက်ပြောင်းပြန်-transcriptase PCR ခြင်းဖြင့်အတည်ပြုခဲ့ NAc သို့ AAV-Cre-GFP နှင့် AAV-GFP ပေးထားတိရိစ္ဆာန်များကနေ microdissected NAc လာကြတယ်အပေါ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ AAV-GFP နှင့် AAV-Cre-GFP ဗိုင်းရပ်စ်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ထုတ်ပေးခဲ့ကြသည် (ဝင်္ et al ။ , 2010) ။
C57BL ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ / 6J ကြွက် 10 ရက်ဆက်တိုက်နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည် (Berton et al, 2006; ။ Krishnan et al, 2007; ။ Vialou et al, 2010 ။ ) ။ အတိုချုပ်တစ်ဦးချင်းစီ mouse ကို CD1 တစ်နေ့လျှင်5မိဘို့မျိုးဆက်များ mouse ကိုအငြိမ်းစားတစ်ဦးကျွမ်းတဝင်မရှိသောနှင့်ရန်လိုအထီးထိတွေ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါ CD1 ကြူးကျြောသူနှင့်တိုက်ရိုက်အပြန်အလှန်ပြီးနောက်တိရိစ္ဆာန်များထို့နောက်အာရုံခံပေမယ့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်အဆက်အသွယ်နှင့်အတူလာမည့် 24 ဇတို့အတွက်တူညီသောလှောင်အိမ်တစ်ခုကပ်လျက်အခန်း၌ထားကြ၏။ ထိန်းချုပ်ရေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ညီမျှလှောင်အိမ်ထဲမှာပေမယ့်တူညီတဲ့ strain အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူသျောခဲ့ကြသည်။ လူမှုရေးအပြန်အလှန်စမ်းသပ်မှုရှုံးနိမ့်၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကိုအောက်ပါ 24 ဇဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
အကျွမ်းတဝင်မရှိသော CD1 အထီး mouse ကိုလူမှုကာကွယ်မှုကိုထုတ်ဝေသော protocol များအရအကဲဖြတ်သည် (Berton et al ။ , 2006; Krishnan et al, 2007; ။ Vialou et al, 2010) ။ စမ်းသပ် mouse ကိုပထမ ဦး ဆုံး 2.5 မိနစ်အဘို့အချည်းနှီးသောဝါယာကြိုးကွက်လှောင်အိမ်များပါဝင်သော Open-field သို့မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဒုတိယသင်ခန်းစာတစ်ခုမှာအကျွမ်းတဝင်မရှိတဲ့ CD1 အထီးမောက်စ်ကိုကြိုးလှောင်အိမ်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဇုန် (လှောင်အိမ်ပတ်ပတ်လည် ၈ စင်တီမီတာကျယ်သည့်စင်္ကြံ) တွင်အချိန်ကိုတိုင်းတာခဲ့သည်။ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းနှင့်ဒဏ်ခံ subpopulations သို့ရှုံးနိမ့်ကြွက်များ၏ခွဲခြားဖျော်ဖြေခဲ့သည် (Krishnan က et al, 8; ။ Vialou et al, 2007 ။ ) ။ ထိန်းချုပ်မှုကြွက်များသည်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောပစ်မှတ်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းအတွက်အချိန်ပိုကုန်သောကြောင့်အပြန်အလှန်အချိုး (၁၀၀) (အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဇုန်တွင်လူမှုပစ်မှတ်မရှိခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း) ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ရမှတ် <၁၀၀ ရှိသောကြွက်များကိုထိလွယ်ရှလွယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးရမှတ်များ those2010 ရှိသူများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်ဟုတံဆိပ်ကပ်ခဲ့သည်။ ကျယ်ပြန့်သောအမူအကျင့်၊ ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့် electrophysiological ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းသည်ဤကွဲပြားလွယ်လွယ်လွယ်သောဒဏ်ခံနိုင်သောလူမျိုးကွဲများ၏တရားဝင်မှုကိုထောက်ခံသည် (Krishnan et al, 100; ။ Wilkinson et al, 100; Vialou et al, 100) ။
လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု, ထိုကြွက်မှ Srffl / FL ကြွက်များ၏အားနည်းချက်ဆနျးစစျဖို့, AAV-GFP သို့မဟုတ် AAV-Cre-GFP အပြန်အလှန်ထိုးသွင်းသုံးနှစ်ဆက်တိုက်အကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်အတူတူပင်နေ့၌အနိုင်ယူပြီးတော့ 24 ဇနောက်ပိုင်းမှာလူမှုရေးအပြန်အလှန်အဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဤသည် submaximal ရှုံးနိမ့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (Krishnan et al, 2007 ။ Vialou et al, 2010 ။ ) မျိုးရိုးဗီဇထိန်းသိမ်းရေးအောက်ပါ prosusceptibility phenotypes ထုတ်ဖေါ်ဖို့ယခင်ကအတည်ပြုထားသည်။
ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ AAV-GFP သို့မဟုတ် AAV-Cre-GFP ဖြစ်စေ overexpressing Srffl / FL ကြွက်လူတတ်အကူအညီမဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည် (Berton et al ။ , 2007) ။ အတိုချုပ်, ကြွက်ရက်ပေါင်း (1 MA,2့ကြာချိန်) consecutives 0.45 ကျော်5ဇများအတွက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, မေးခှနျးထုတျခြေလျင်လှုပ်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု၏နေ့တွင်, ကြွက် 15 ဆက်တိုက်ထွက်ပေါက်စမ်းသပ်မှုတွေများအတွက်အကွက်ထဲသို့ပြန်လည်ထိတွေ့ပေါ်လွင်လာခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ထိတ်လန့်ကိုအပ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ကြွက်ဟာကပ်လျက်, nonelectrified အခန်းရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်မှလွတ်မြောက်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးသောခဲ့ကြသည်။ အောင်မြင်တဲ့ထွက်ပေါက်ပြီးနောက်တံခါးကိုအလိုအလျှောက်ကိုပိတျထားခဲ့သညျနှငျ့အလွတ်အောင်းနေချိန်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ကြွက် 25 ့အတွင်းမလွတ်ခဲ့ဘူးသောအခါ, ရုံးတင်စစ်ဆေးရပ်စဲခံခဲ့ရကာပျက်ကွက်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ မတိုင်မီကလေ့လာမှုများ NAc အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်စကားရပ်နှင့်အခြားဒေသများစိတ်ဖိစီးမှုမရှိခြင်းအတွက်အခြေခံထွက်ပေါက်အပြုအမူအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ရှိကြောင်း (နယူတန် et al, 2002 ။ Berton et al, 2007 ။ ) ပြသခဲ့ကြသည်။
AAV-GFP သို့မဟုတ် AAV-Cre-GFP ၏ Intra-NAc ဆေးထိုးပြီးနောက်သီတင်းနှစ်ပတ်အကြာ၊ Srffl / fl ကြွက်များသည် locomotor sensitization သို့ရောက်ခဲ့သည်။ ကြွက်များကိုတစ်နေ့လျှင် ၃၀ မိနစ် ၄ for အတွက် locomotor နယ်ပယ်တွင်လေ့ကျင့်ထားသည်။ အလေ့အကျင့်ပြီးနောက်တိရစ္ဆာန်များကို intraperitoneally ထိုးဆေးကို ၁၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း - HCl ဖြင့်ထိုးသွင်းခဲ့ပြီး locomotor သေတ္တာများထဲသို့ထည့်သည်။ တိရိစ္ဆာန်များ၏စက်ခေါင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုတစ်နေ့လျှင်မိနစ် ၃၀ ကြာသည့်လူနာ၏ရောင်ခြည်အားချိုးဖောက်ရန်အတွက် photobeam system (San Diego Instruments) ကို အသုံးပြု၍ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ Locomotor sensitization 30 of တစ်ကာလအတွင်းမှတျတမျးတငျထားသခဲ့သည်။
အေးစက်သောအရပ် preference ကို။
အောက်ဖော်ပြပါပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းနေရာအေးစက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (Maze et al ။ , 2010), ကောက်ယူခဲ့သည်။ အတိုချုပ်အားဖြင့် Srffl / fl ကြွက်များရှိ AAV-GFP သို့မဟုတ် AAV-Cre-GFP ကို ​​intra-NAc ထိုးသွင်းပြီးနောက် ၁၈dတွင်တိရိစ္ဆာန်များအားအခြေအနေအရကွဲပြားသောပတ် ၀ န်းကျင်သုံးခုပါဝင်သည့်အေးစက်ခန်းများထဲသို့ထည့်သွင်းထားသည်။ အေးစက်နေသောအခန်းနှစ်ခုတွင်သိသာစွာကြိုက်နှစ်သက်သည့်ကြွက်များကို (တိရစ္ဆာန်အားလုံး၏ <၁၀%) တွင်လေ့လာမှုမှဖယ်ထုတ်ထားသည်။ တည်ရှိဆဲဖြစ်နိုင်သည့်မည်သည့်အခန်းလိုက်ဘက်လိုက်မှုမျိုးကိုမဆိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်အဖွဲ့များကိုထပ်မံမျှတစွာညှိနှိုင်းခဲ့သည်။ နောက်ရက်များ၌တိရိစ္ဆာန်များကိုဆားဖြင့်ထိုးသွင်းပြီးနေ့လည်ပိုင်းတွင်မိနစ် ၃၀ ခန့်အခန်းတစ်ခန်းထဲထည့်ကာကိုကင်း (၇.၅ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်၊ ip) ဖြင့်ထိုးသွင်းခဲ့ပြီး၊ ကုသမှုတစ်ခုအနေဖြင့်အသင်းအပင်းသင်တန်းနှစ်ခု (ဆားငန်နှင့်ကင်းနှစ်တွဲ) ။ စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်သည့်နေ့တွင်ကြွက်များကိုကုသမှုမပါဘဲပြန်မိနစ် ၂၀ အတွင်းပြန်လည်နေရာချကာဘေးထွက် ဦး စားပေးအကဲဖြတ်ရန်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကုထုံး၏ထိရောက်မှုကိုသေချာစေရန်ကိုကင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခန်းများအတွင်းရှိရောင်ခြည်ဖြာထွက်ခြင်းများမှတစ်ဆင့်ကိုကင်း၏ Locomotor တုံ့ပြန်မှုများကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ အုပ်စုများအားလုံးအတွက်ဆားငန်ရေကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်ရွေ့လျားမှုကိုဗိုင်းရပ်စ်ကုသမှုမှမထိခိုက်စေရန်သေချာစေခဲ့သည်။
Srffl / FL ကြွက် Open-လယ်ပြင်, အလင်း / မှောင်မိုက်၌စမ်းသပ်ပြီးနှင့်ထုတ်ဝေ protocol များပေါ်တွင် အခြေခံ. အတင်းအဓမ္မ-ရေကူးစမ်းသပ်မှုခဲ့ကြသည် (Vialou et al ။ , 2010) ။ open-လယ်ပြင်၌ကြွက်များ၏လှုပ်ရှားမှုအနီရောင်အလင်းအခြေအနေများအောက်တွင်ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုခြေရာခံစနစ် (Ethovision) ကို အသုံးပြု. မိ5များအတွက်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အလငျး / မှောင်မိုက်စမ်းသပ်မှုများအတွက်, ကြွက်လွတ်လပ်စွာသေးငယ်တဲ့တံခါးပိတ်နယ်ပယ်တွင်ချိတ်ဆက်ထားတစျခုကြီးမားသော illumination နယ်ပယ်တွင်၏ရေးစပ်နှစ် chambered box ကိုစူးစမ်းလေ့လာခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ ကြွက်ဖြစ်စေဝင်းအတွင်းသုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုအကဲဖြတ်ဖို့5မိ၏ကာလအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ open-လယ်ပြင်နဲ့အလင်း / မှောင်မိုက်စမ်းသပ်မှုများတွင်ဗဟိုနှင့်အလင်းနယ်ပယ်တွင်သုံးစွဲအချိန်, အသီးသီးစိုးရိမ်စိတ်-related တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုပြောင်းပြန်အညွှန်းကိန်းအဖြစ်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးက 1dအတင်းအဓမ္မ-ရေကူးစမ်းသပ်5မိ၏ကာလအဘို့ကောက်ယူခဲ့သည်။ တစ်ဦး prodepressant ကဲ့သို့သောအပြုအမူအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့အတင်းအဓမ္မ-ရေကူးစမ်းသပ်ကာလအတွင်း immobility အချိန်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ 1dအတင်းအဓမ္မ-ရေကူးစမ်းသပ် immobility ကြိမ်လျှော့ချကျယ်ကျယ်ကြွက်များတွင်အသုံးပြုခဲ့ပြီးကြောင်းလက္ခဏာကုထုံးအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တရားဝင်မှု၏အတိုင်းအတာအဖြစ်အတည်ပြုထားသည်။
Srffl / FL ကြွက် anesthetized နှင့် 4% paraformaldehyde / PBS နှင့်အတူ intracardially perfused ခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက် 30% sucrose / PBS အတွက်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် cryoprotected ခဲ့ကြသည်။ မှု Coronal အပိုင်း (30 μm) တစ်ခဲ microtome အပေါ်ဖြတ် immunohistochemical ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်။ Srffl ၏ validation / ခေါက်ထွက် FL SRF (; Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ 1 / 2000) ဆန့်ကျင်ညွှန်ကြားထားတဲ့ polyclonal antibody ကိုသုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ အဆိုပါ Cre GFP မှ fused ကြောင့် Cre စကားရပ်, (ကြက်သား polyclonal, 1 / 8000, Aves Labs က) ခွဲဖြာဦးနှောက်ထဲမှာစကားရပ် GFP မှတဆင့်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ခဲ့သည်။ Srffl အတွက်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ΔFosBသော induction ၏အရေအတွက်အဘို့ / ခေါက်ထွက် FL ကြွက်, ΔFosBပရိုတိန်း (; Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ 1 / 1000) ၏ N-terminal ကိုဒေသဆန့်ကျင်ကြီးပြင်းနေတဲ့ယုန် polyclonal antibody ကိုသုံးပြီးရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ပုံရိပ်တွေဟာ confocal ဏု (; Zeiss ချဲ့× 20) နဲ့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ΔFosB immunoreactivity ဘို့အနုတ်လက္ခဏာနှင့်အပြုသဘောအဖြစ်ရေတွက် GFP-immunopositive ဆဲလ်အရေအတွက်နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးချင်းစီအဟိတ်တိရစ္ဆာန်များအတွက်တွက်ချက်ယုတ်တန်ဖိုးများနှင့်အတူအသီးအသီးတိရိစ္ဆာန်အဘို့အမျိုးစုံပုံရိပ်တွေအတွက် quantified ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်တစ်ဦးချင်းလေ့လာရေးစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။
လူ့ postmortem NAc တစ်ရှူး
လူ့သေဆုံးမှု ဦး နှောက်တစ်သျှူးကို Dallas Brain Collection မှရရှိသည်။ ထိုတွင်တစ်ရှူးများကို Dallas Medical Examiner Office နှင့် Texas's Southwestern's Tissue Transplant Program မှလာသည်။ တစ်သျှူးများကိုအသက်အရွယ်၊ သေဆုံးမှုလွန်ကာလ၊ RNA သမာဓိနံပါတ် (RIN) နှင့် pH တို့အတွက်ကိုက်ညီသောယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်လုံးမှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ သေဆုံးခြင်းအချိန်တွင် neurotoxic တ္ထုများစားသုံးခြင်းအပါအ ၀ င်တိကျသော agonal အချက်များ၊ သေဆုံးချိန်တွင် ဦး နှောက်တစ်သျှူးတွင် RNA ၏သမာဓိကိုသြဇာသက်ရောက်သည် (Tomita et al ။ , 2004) ။ ဤရွေ့ကားအခြေအနေရှစ်ခုစီတွင်တစ်သျှူးနမူနာများကိုသရုပ်ဖော်ရန် agonal factor scale (AFS) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ agonal အချက်မရှိခြင်းကိုရမှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး0နှင့် 1 ကြားရှိစုစုပေါင်း AFS ရမှတ်ကို0အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ agonal ရမှတ်များသုညနှင့် ၁ နှင့်တစ်ရှူးသည်အရည်အသွေးကောင်းသောနမူနာများကိုထင်ဟပ်သည်။ အမှုလူ ဦး ရေစာရင်းဇယား 8. ၌ဖော်ပြထားသောတစ်ရှူးအရည်အသွေးမြင့်မား RIN တန်ဖိုးများအားဖြင့်အတည်ပြုခဲ့သည်နေကြသည်။ -0 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် isopentane နှင့် -1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိုလှောင်ထဲမှာလျင်မြန်စွာအေးခဲမတိုင်မီဖြစ်ပွားမှုစံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြောင်းမဲ့ကြ၏ နောက်ထပ် NAc ၏ခွဲစိတ်အေးခဲတစ်သျှူးအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ အဆိုပါ UT အနောက်တောင်ပိုင်းအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ဘုတ်အဖွဲ့သုတေသနအသုံးပြုရန်ဤတစ်သျှူးများစုဆောင်းခြင်းပြန်လည်သုံးသပ်အတည်ပြုခဲ့သည်။ စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပွားသူတိုင်းအတွက်သတင်းပေးသူအားတိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကိုနောက်ပိုင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရောဂါဖြစ်ပွားမှုမှတ်တမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါ၏သဘောတူညီမှုကိုရောဂါစိတ်ပညာရှင်နှစ်ယောက်က DSM-IV စံသတ်မှတ်ချက်ဖြင့်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်အမှုများတွင်သွေးသွင်းခြင်း၊ အရက်၊ စိတ်ကျရောဂါကုသမှုခံယူနေသော်လည်းလူနာအားလုံးသေသည့်အချိန်တွင်ဆေးခန်းများ၌စိတ်ဓာတ်ကျကြသည်။ တစ်ရှူးနမူနာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်မျက်စိကန်းသောပုံစံဖြင့်ထုတ်ပေးခဲ့သည်။
လူ့ postmortem လေ့လာမှုများအတွက်လူဦးရေဒေတာ
ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့လူ့ခြင်းနှင့်မောက်စ် NAc နမူနာ (ဝင်္ et al ။ , 2010) လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်။ အေးစက်နေတဲ့တစ်ရှူး protease နှင့်အတူ 5% SDS (Roche) နှင့် phosphatase inhibitors (Sigma) င်တစ်ဦး 1 MM HEPES lysis ကြားခံအတွက် sonicated ခဲ့သည်။ ပရိုတိန်းပါဝင်မှုကတော့ DC ပရိုတိန်း assay (Bio-Rad) ကဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်။ ပရိုတိန်းနမူနာ၏တန်းတူပမာဏ SDS-စာမျက်နှာနှင့်အနောက်တိုင်းချေအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ သို့မဟုတ် GAPDH (1 / 2000; Abcam); အနောက်တိုင်းချေ SRF (Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ 1 / 1500) တစ်ခု antibody ကို အသုံးပြု. ပျေါခဲ့ကြပြီးတော့ scan ဖတ်ခြင်းနှင့် Odyssey ပုံရိပ်စနစ် (Licor) ကို အသုံးပြု. quantified ခဲ့ကြသည်။
RNA အထီးကျန်မှုတွေနဲ့အရေအတွက် PCR
RNA အထီးကျန်မှုတွေ, အရေအတွက် PCR (qPCR), နှင့်အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ (ဝင်္ et al, 2010; ။ Vialou et al, 2010 ။ ) ။ အတိုချုပ်, RNA TriZol ဓါတ်ကူပစ္စည်း (Invitrogen) နဲ့အထီးကျန်နှင့် Qiagen ထံမှ RNAeasy အသေးစားပစ္စည်းများနှင့်အတူထပ်မံသန့်ခဲ့ပါတယ်။ အားလုံး RNA နမူနာ 260 / 280 နှင့် 260 / 230 ≥1.8တန်ဖိုးထားရှိသည်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ ပြောင်းပြန်ကူးယူ iScript (Bio-Rad) ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ SYBR အစိမ်းရောင် (Quanta) ကို အသုံးပြု. qPCR အောက်ပါသံသရာ parameters များကိုအတူတစ်အသုံးချ Biosystems 7900HT RT ကို PCR စနစ်ဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်:2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 95 မိ; 40 s အတွက် 95 ° C ၏ 15 သံသရာ, 59 30့72 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 33 s အတွက်အဘို့ကို C °; နှင့်တစ်ခုတည်း PCR ထုတ်ကုန်များ၏အတည်ပြုချက်ကိုများအတွက် dissociation ခါးဆစ်ထုတ်လုပ်ဖို့ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 95 မှအပူအဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသော။ ဒေတာΔΔC (t) method ကိုအတူကို C ကုသမှုအခြေအနေ (t) တန်ဖိုးများ (ဖြစ်ပေါ်နိုင်သို့မဟုတ်ဒဏ်ခံကြွက် vs ထိန်းချုပ်မှု, ဒါမှမဟုတ်လူ့ထိန်းချုပ်မှု vs စိတ်ဓာတ်လူနာ) နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (Tsankova et al ။ , 2006) ခံခဲ့ရသည်။ ΔFosB qPCR primer: foward AGGCAGAGCTGGAGTCGGAGAT နှင့် GCCGAGGACTTGAACTTCACTCG reverse ။
chip (2010 ။ ဝင်္ et al), ထိန်းချုပ်မှုကနေထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှနှစ်နိုင်ငံ NAc လာကြတယ်အပေါ်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖျော်ဖြေနှင့်ဒဏ်ခံကြွက် (လေး 14-gauge လာကြတယ် / mouse ကို) 1 ဇသည်လွန်ခဲ့သောရှုံးနိမ့်အတွေ့အကြုံကိုပြီးနောက်နှင့် saline- နှင့် cocaine- ထံမှခဲ့သည် နောက်ဆုံးကုသမှုပြီးနောက်တိရိစ္ဆာန်များ 24 ဇကုသ။ တစ်ရှူး 1% Formaldehyde အတွက် Cross-နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ fixation နောက်ပိုင်းတွင် glycine လျှောက်လွှာကနေတဆင့်ကြားဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်တစ်သျှူးများကိုဆေးကြောခဲ့သည်နှင့်အသုံးပြုမှုသည်အထိ -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိုထား၏။ Sheared chromatin ယခင်ကသံလိုက်ပုတီး (; Invitrogen Dynabeads က M-280) ကိုခညျြနှောငျ anti-SRF antibody ကို (Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ) ဖြင့်နေ့ချင်းညချင်းနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့သည်။ ပြောင်းပြန် Cross-ချိတ်ဆက်နှင့် DNA ကိုသန့်စင်ပြီးနောက်, fosb ကမကထမှ SRF ၏စည်းနှောင်က်ဘ်ဆိုက်များကိုစညျးနှစ်ခုသွေးရည်ကြည်တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်များ fosb ကမကထတစ်ဒေသ spanning primer သုံးပြီး qPCR ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ SRF pulldowns သိသိသာသာမ antibody ကိုထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခဲ့သည်။ mouse fosb ဗီဇကမကထ primer: forward CCCTCTGACGTAATTGCTAGG နှင့် reverse, ACCTCCCAAACTCTCCCTTC ။
ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းများတွင်ထိန်းချုပ်မှု၊ ထိလွယ်ရှလွယ်နှင့်ကြံ့ခိုင်ကြွက်များအကြားနည်းလမ်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ရန် One-way ANOVA များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Two-way ANOVA များကို osFosB သော induction ကို Srf ဒေသခံခေါက်ထွက်ကြွက်များတွင်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ Srf ၏ထွက်ပေါ်လာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာပြီးအကူအညီမဲ့ခြင်းနှင့် locomotor sensitization protocols များနှိုင်းယှဉ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျောင်းသား၏ t စစ်ဆေးမှုများသည် Srf ထွက်ပေါက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို inFosB သော induction နှင့်လူ့သားစဉ်မြေးဆက်တစ်သျှူးများနှင့် mouse ကို ChIP ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ p ≤ 0.05 အခါစမ်းသပ်အခြေအနေများအကြားခြားနားချက်များကစာရင်းအင်းသိသိသာသာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
လူ့စိတ်ကျရောဂါနှင့်လူမှုရေးအရရှုံးကြွက်တွေမှာ SRF နှင့်ΔFosBစကားရပ်
စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် SRF အတွက်အလားအလာရှိသောအခန်းကဏ္exploreကိုလေ့လာရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သေဆုံးပြီးနောက်စိတ်ဓာတ်ကျသည့်လူနာများ၏ NAc တွင် SRF ပရိုတင်းဖော်ပြမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ စိတ်ကျရောဂါဘာသာရပ်များသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ် - လိုက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှု (t (19) = 1.9; p <0.05) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ NAc အတွက်သိသိသာသာလျှော့ချ SRF အဆင့်ဆင့်ပြသ (ပုံ 1A) ။ ။ လှုပ်ရှားမှု - မှီခိုချက်ချင်းမျိုးရိုးဗီဇထုတ်ဖော် (Ramanan et al ။ , 2005) ကိုထိန်းညှိရာ၌ SRF ၏အခန်းကဏ္ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် SRF သည်ဤ ဦး နှောက်ဒေသရှိ osFosB စကားရပ်ကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်ပါဝင်နိုင်သည်ဟုယူဆခဲ့သည်။ ဒီအယူအဆ၏ထောက်ခံမှုမှာတော့ကျနော်တို့Δfosb mRNA အဆင့်ဆင့်ကိုလည်းသိသိသာသာစိတ်ဓာတ်ကျလူသား၏ NAc အတွက်လျှော့ချခဲ့လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ (t (16) = 1.8; p <0.05) (ပုံ 1B ။ ) ။ ဤအခြေအနေသည်ဤအခြေအနေများအောက်တွင် osFosB ပရိုတင်းပမာဏလျော့နည်းသွားခြင်း၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်လည်းကိုက်ညီသည် (Vialou et al ။ , 2010) ။
SRF ၏နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှု NAc အတွက်လျော့နည်းသွားΔFosBကူးယူနှင့်ဆက်စပ်။ တစ် ဦး က, B, Postmortem လူ့စိတ်ဓာတ်လူနာ SRF ပရိုတိန်း (= = 10 / အုပ်စုတစ်စု; A) ကိုလျှော့ချအဆင့်ဆင့်နှင့် NAc အတွက်Δfosb mRNA စကားရပ် (= 8 / အုပ်စုသည်; B ကို) ။ ကို C, ကြွက်နာတာရှည် (10)) လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုအကြောင်းမဲ့ကြွက်များကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်နှင့်ဒဏ်ခံ subpopulations သို့အုပ်စုဖွဲ့ခဲ့သည်။ ၊ နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်မှုစိတ်ဖိစီးမှုသည်စီအီးအက်ဖ်တွင်ပြထားသောလူမှုရေးအပြန်အလှန်စစ်ဆေးမှုအပြီးတွင် ၂၄ နာရီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကထိတွေ့လွယ်သောကြွက်များ၏ NAc တွင် SRF ပရိုတင်းပမာဏကိုလျှော့ချပေးသည်၊ သို့သော်ကြံ့ခိုင်ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ အီးအီးတွင်ပြထားသည့်လူမှုရေးအပြန်အလှန်စစ်ဆေးမှုအရ၊ NAc ရှိ osfosB mRNA အဆင့်များသည်ထိခိုက်လွယ်သောကြွက်များတွင်မပြောင်းလဲပဲရှိသော်လည်း ဒဏ်ခံသတ္တဝါများ (= = 24-7 / အုပ်စုတစ်စု) တွင် upregulated ။ အက်ဖ်အက်ဖ်အက်ဖ်အက်ဖ်အက်ဖ်သည်ပရိုတိန်း၏ကြံ့ခိုင်မှုတွင်နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်စိတ်ကျေနပ်လွယ်သောကြွက်များရှိ fosb ဗီဇအားမြှင့်တင်ပေးသူနှင့်ပိုမိုစည်းနှောင်လာသည် (n = 15 / group) ။ ပြထားသောဒေတာများကို SEM ±± SEM (error bar အဖြစ်ကိုယ်စားပြုသည်) ဟုဖော်ပြသည်။ Con, ထိန်းချုပ်ရေး။ Dep ။ , စိတ်ဓာတ်ကျ; Sus, ဖြစ်ပေါ်နိုင်; res ။ , ဒဏ်ခံ။ ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ် * p <5; ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ် *** p <0.05; #p <0.001 ဖြစ်ပေါ်နိုင်နှိုင်းယှဉ်; ## p <0.05 ဖြစ်ပေါ်နိုင်နှိုင်းယှဉ်; ### p <0.01 ဖြစ်ပေါ်နိုင်နှိုင်းယှဉ်။
ဤတွေ့ရှိချက်များကိုတိုးချဲ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်မှုစိတ်ဖိစီးမှု protocol ကိုကြွက်များတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထိခိုက်လွယ်သောကြွက်များအားခွဲခြားနိုင်သောအုပ်စုနှစ်စုသည်သိသာထင်ရှားသော (Krishnan et al ။ , 2007) လူမှုကာကွယ်မှုကို အခြေခံ၍ ထိခိုက်လွယ်သောတိရိစ္ဆာန်များသည်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသောတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လူမှုရေးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည် (F (2,23), 157.2) = 0.001; p <0.001; ထိန်းချုပ်မှု vs ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ Bonferroni ဆုံးမပဲ့ပြင်, p <0.05; t ကိုထိန်းချုပ်မှု, p <0.01; ခံနိုင်ရည် vs ခံနိုင်ရည်, p <1) နှင့်အတူ t ကိုစမ်းသပ်မှု (ပုံ။ 2,32C) ။ နောက်ဆုံးရှုံးနိမ့်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်နှစ်ရက်အကြာတွင် NAc ရှိ SRF အသုံးအနှုန်းအတွက်ဆန်းစစ်နိုင်စွမ်း၊ ဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောထိန်းချုပ်မှုကြွက်များအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ လူ့စိတ်ကျရောဂါ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်ဆင်တူသည် SRF ပရိုတိန်းပမာဏသည်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက NAc တွင်သိသာထင်ရှားသည့်လျှော့ချနိုင်မှုရှိသော်လည်း SRF အဆင့်များသည်ကြံ့ခိုင်သောကြွက်များ၏ NAc တွင်ထိခိုက်မှုမရှိပါ (F (4.7) = 0.05; p <0.05; t နှင့် testes) ထိန်းချုပ်မှု vs ဖြစ်ပေါ်နိုင် Bonferroni ဆုံးမပဲ့ပြင်, p <0.05; ခံနိုင်ရည် vs ခံနိုင်ရည်, p <1) (ပုံ XNUMXD) ။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအုပ်စုသုံးစု၏ NAc တွင်Δfosb mRNA စကားရပ်ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးခံနိုင်ရည်ရှိသောတိရိစ္ဆာန်များတွင်Δfosbဖော်ပြမှုတွင်သိသိသာသာတိုးလာခြင်းကိုလေ့လာခဲ့သည်။ သို့သော်သိသာထင်ရှားသောတိုးမြှင့်မှုမရှိဘဲကြွက်များတွင်တွေ့နိုင်ခြင်းမရှိ (t (14) = 2.1; p <0.05) ) (ပုံ။ 1E) ။ နောက်ထပ် SRF အဆင့်နှင့်Δfosbကူးယူအကြားဖြစ်နိုင်သမျှ interaction ကစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကျနော်တို့ SRF fosb ဗီဇကမကထမှ binding SRF ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းနှင့်ဒဏ်ခံကြွက်များ၏သီးခြားဆောင်များတွင်အတွက်နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ပြောင်းလဲခဲ့သည်ရှိမရှိဆန်းစစ်ရန် ChIP ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ခံနိုင်ရည်ရှိသောတိရိစ္ဆာန်များသည်သိသာစွာတိုးမြှင့်ထားသည့် SRF ကိုထိန်းချုပ်မှုများ (t (8) = 2.1; p <0.05) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက NAc ရှိ fosb ကမကထပြုသူနှင့်စည်းနှောင်ထားသောကြွက်များ (t (8) = 2.0; p <0.05) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြသခဲ့သည်။ ထိတွေ့လွယ်သောကြွက်များတွင် SRF သော induction မရှိခြင်းကိုထင်ဟပ်နိုင်သည့်ကြွက်များနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားခြားနားချက်မရှိပါ။
နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်မှုဖိစီးမှုအောက်ပါ osFosB ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင် SRF ၏အခန်းကဏ္confirmကိုအတည်ပြုရန် Srffl / fl ကြွက်များသည် NAc မှ osFosB ၏စိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသော SRF ၏ရွေးချယ်မှုဖျက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Srffl / fl ကြွက်များသည် Atra-NAc ကို AAV virus သယ်ဆောင်ထားသော GFP သို့မဟုတ် Cre-GFP နှင့်အတူထိုးသွင်းလိုက်သည်။ AAV-Cre-GFP မှသွေးဆောင်သည့် SRF ၏ NAc- သတ်သတ်မှတ်မှတ်ခေါက်ထွက်ပေါက်ကို immunohistochemically (ပုံ - ၂ က) အတည်ပြုခဲ့သည်။ အမှန်မှာ၊ SRF အစွန်းအထင်းများနှင့် Cre စကားရပ်တို့အကြားတွင်ထပ်တူထပ်တိုးမှုမရှိခဲ့ပေ၊ microdissected NAc လာကြတယ်များတွင်ကျနော်တို့ SRF ပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်သိသိသာသာ 2% ကျဆင်းခြင်းတွေ့ရှိခဲ့ (t (50) = 11; p <4.3) ။ အဆိုပါပမာဏသည်ထိုကဲ့သို့သော microdissections အတွက်တစ်သျှူးအစိတ်အပိုင်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မခံရဆိုတဲ့အချက်ကိုထင်ဟပ်။
SRF သည်နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်မှုဖိအားဖြင့် osFosB သော induction ကိုဖျန်ဖြေပေးသည်။ A-Cre-GFP ကို ​​Srffl / fl ကြွက်များ၏ NAc ထဲသို့ A, Injection သည် SRF ပရိုတိန်း၏ထွက်ပေါ်လာမှုကြောင့် Cre- ဖော်ပြအာရုံခံဆဲလ်များပေါ်ပေါက်လာသည်။ AAV-GFP ကိုထိုးဆေးသည်သိသာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ B, NAc ထံမှထိုကဲ့သို့သောရွေးချယ်ခေါက်ထွက်ခွာသွားနာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု (= =4/ group ကို) အပြီး NAc အတွက်ΔFosB၏သော induction လုံးဝပိတ်ဆို့။ ပြထားသောဒေတာများကို SEM ±± SEM (error bar အဖြစ်ကိုယ်စားပြုသည်) ဟုဖော်ပြသည်။ * p <0.05 AAV-GFP ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်; ** p <0.01 AAV-GFP ရှုံးနိမ့်နှိုင်းယှဉ်။
ကျနော်တို့နောက်ထပ် AAV-Cre-GFP သို့မဟုတ် AAV-GFP ဖြစ်စေနှင့်အတူ Intra-NAc ထိုးသွင်းရှုံးနိမ့် Srffl / fl ကြွက်များ၏ NAc အတွက် osFosB များအတွက်အရေအတွက် immunohistochemistry ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက် osFosB စကားရပ်သည် AAV-GFP- ထိုးသွင်းထားသောတိရိစ္ဆာန်များ၏ NAc တွင်သိသိသာသာသွေးဆောင်ခဲ့သည် (ဗိုင်းရပ်စ်×ကုသမှုအပြန်အလှန်၊ F (1,12) = 6.4; Bonferroni ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ရှုံးနိမ့်ခြင်း၊ p <0.05) ။ AAV-GFP, p <0.01) vs AAV-Cre ။ သို့သော်ဒီသော induction နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုအားဖြင့် NAc အတွက်ΔFosBသော induction SRF လိုအပ်ကြောင်းပြသ AFF-Cre-GFP (ပုံ။ 2B) ကိုလက်ခံရရှိ Srffl / fl ကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိမခံခဲ့ရပါဘူး။
SRF ခေါက်ထွက် NAc အတွက် prodepression- နှင့် proanxiety ကဲ့သို့ phenotypes အားပေးအားမြှောက်
နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုအားဖြင့် osFosB သော induction သည်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကိုပြေလည်အောင်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သည် (Vialou et al ။ , 2010) ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် SRF ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် osFosB သော induction ၏ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သောတိရိစ္ဆာန်များတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာသောဆိုးကျိုးများကိုဖော်ပြနိုင်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှု၏ဆိုးကျိုးများကိုပိုမိုအားနည်းချက်တိရိစ္ဆာန်များ။ ဒီအယူအဆကိုစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကျနော်တို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Srffl / fl ကြွက်များတွင် Srf ဗီဇ၏ဒေသခံ NAc- တိကျတဲ့ဖျက်မှုသွေးဆောင်နှင့်ရလဒ်ကြွက်နှင့်၎င်းတို့၏ထိန်းချုပ်မှုအခြေခံစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအကဲဖြတ်ရန်အမူအကျင့်ပါရာဒိုင်းတစ် ဦး ဘက်ထရီအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည် အပြုအမူကဲ့သို့ Local NAc ဖျက်သိမ်းမှုအား SRF မှအတင်းအဓမ္မရေကူးစမ်းသပ်မှု (t (30) = 2.5; p <0.05) မှတဆင့်တိုင်းတာသည့်အတိုင်းဖိနှိပ်ခြင်းကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်) ထို့အပြင် open-field တွင်တိုင်းတာထားသော anxiogenic effect (t (38)) = 1.9; p <0.05) နှင့်အလင်း / မှောင်မိုက်စမ်းသပ်မှု (t (8) = 1.9; p <0.05) ။ ထို့ကြောင့် NAff သို့ AAV-Cre-GFP ကိုလက်ခံရရှိသည့် Srffl / fl ကြွက်များသည်အတင်းအဓမ္မရေကူးစမ်းသပ်မှုတွင်၊ အနိမ့်အမြင့်ကွင်းပြင်၏အလယ်တွင်အချိန် နည်း၍ အလင်းရောင် / မှောင်မိုက်သောအကွက်ထဲတွင်အချိန်နည်းသွားသည်ကိုပြသခဲ့သည် AAV-GFP- ထိုးသွင်းတိရိစ္ဆာန်များ (ပုံ။ 3A-C) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ သို့သော် SRF ၏ intra-NAc ဖျက်ခြင်းသည်ရွေ့လျားခြင်း၏အခြေခံအဆင့်များကိုမပြောင်းလဲစေဘဲ SRF ခေါက်ထွက်နေသောတိရိစ္ဆာန်များတွင်အပြုအမူသက်ရောက်မှုများသည်ယေဘုယျရွေ့လျားလှုပ်ရှားမှု၌ပုံမှန်မဟုတ်သောကြောင့်မဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြသည် (ပုံ။ 3D) ။ ဤအချက်အလက်များသည်ယခင်အစီရင်ခံချက်များအရစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပြီး၊ NAc ရှိ osFosB သည်စိတ်ကျရောဂါနှင့်တူသောအပြုအမူများကိုထိန်းညှိထားသော်လည်းစိုးရိမ်ဖွယ်ရာတုံ့ပြန်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပုံမရပါ (Vialou et al ။ , 2010) ။ SRF ဆုံးရှုံးမှုသည် anxiogenic တုန့်ပြန်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိတွေ့ရှိချက်များက၎င်းသည် osFosB ထက်အခြားပစ်မှတ်များမှတဆင့်ပြုလုပ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။
အဆိုပါ NAc မှ SRF ထွက်ပေါက်သည် prodepression- နှင့် proanxiety ကဲ့သို့သော phenotypes များကိုအားပေးသည်။ AFC C, NAF မှ SRF ၏ထွက်ပေါက်ခွဲခြားမှု AAV-Cre-GFP ထိုးသွင်းမှုမှတစ်ဆင့် Srffl / fl ကြွက်များ၏ NAc သို့ရရှိသောကြောင့်အတင်းအဓမ္မရေကူးစမ်းသပ်မှုတွင်ရွေ့လျားမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည် (n = 14-18 / group); တစ် ဦး က) နှင့်အသီးသီး (= = 5-15 / အုပ်စုတစ်စု), အလယ်ပိုင်းအတွက်သုံးစွဲအချိန်နှင့် Open-field (ခ) နှင့်အလင်း / မှောင်မိုက် (C) စမ်းသပ်မှုအတွက်အလင်းအခန်းများတွင်သုံးစွဲအချိန်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ : D, Basal locomotor လှုပ်ရှားမှု၌အဘယ်သူမျှမခြားနားချက် AAV-GFP သို့မဟုတ် AAV-Cre-GFP ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc ထိုးလက်ခံရရှိကြွက်များ၏ Open-field မှာလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ E, F, သင်ယူနိုင်သည့်အကူအညီမဲ့မှုကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်နိုင် (n = 7-8 / group; E) နှင့်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်မှုစိတ်ဖိစီးမှု (n = 5-6 / group; F) ကိုတိုင်းတာသည့်အတိုင်းလွတ်မြောက်ရန်အခွင့်အလမ်းနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်အချိန်များ ။ ပြထားသောဒေတာများကို SEM ±± SEM (error bar အဖြစ်ကိုယ်စားပြုသည်) ဟုဖော်ပြသည်။ * p <0.05 GFP နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သို့မဟုတ်ပစ်မှတ်ပျက်ကွက်နှိုင်းယှဉ်; ** p <0.01 GFP နှိုင်းယှဉ်; *** p <0.001 GFP နှိုင်းယှဉ်။
NAc တွင် SRF ဖျက်ခြင်းသည်တိရိစ္ဆာန်များအားထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှု၏ဆိုးကျိုးများကိုထိခိုက်စေနိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုလည်းလေ့လာခဲ့သည်။ NAff သို့ AAV-Cre-GFP သို့မဟုတ် AAV-GFP နှင့်ထိုးသွင်းထားသော Srffl / fl ကြွက်များသည်စိတ်ဓာတ်ကျမှုပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့်စစ်ဆေးပြီး၊ လေ့လာသင်ယူမှုမရှိသောအခြေအနေတွင် AAV-Cre-GFP ကိုလက်ခံရရှိသော Srffl / fl တိရိစ္ဆာန်များသည်ရှောင်တိမ်း။ မရနိုင်သောခြေလျင်ဒဏ်ကိုစိတ်ဖိစီးမှုများ (ကုသမှု×စမ်းသပ်မှုများအပြန်အလှန်၊ F (14,180) = 10.2; နှင့် Bonferroni ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းဖြင့်စမ်းသပ်မှုများအပြီးတွင်) ခြေထောက်မှလွတ်မြောက်ရန်အောင်းနေသည့်အချိန်ကိုပြသခဲ့သည်။ p <0.001; AAV-Cre vs AAV-GFP, p <0.01), စိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင်အပြုအမူလိုငွေပြမှု (ပုံ။ 3E) မှတိုးမြှင့်လွယ်ကူစွာထိခိုက်ညွှန်ပြ။ အလားတူပင်၊ NAc မှဒေသခံ SRF ဖျက်မှုသည်လူမှုရေးမုန်းတီးမှုကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည် (t (10) = 1.8; p <0.05) နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်မှုစိတ်ဖိစီးမှုအောက်ပါ AAV-GFP- ထိုးဆေးဖြင့်ထိန်းချုပ်သောတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက (t (3) = XNUMX) ။
ΔFosBသော induction အတွက် SRF ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်ကိုကင်းရန်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုမရှိခြင်း
ကိုကင်းကဲ့သို့သောအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် osFosB သည် NAc တွင်သွေးဆောင်မှုကြောင့်ကိုကင်းလုပ်ဆောင်မှုတွင် SRF အတွက်အလားအလာရှိသောအခန်းကဏ္examineကိုလေ့လာရန်စိတ် ၀ င်စားသည်။ နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မတူဘဲထပ်ခါတလဲလဲကိုကင်းထိတွေ့မှုက NAc တွင် SRF ပရိုတင်းဖော်ပြမှုကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိ (t (14) = 0.8; p> 0.05) (ပုံ ၄ အေ) နှင့်ဤ ဦး နှောက်ဒေသရှိ fosB မျိုးဗီဇမြှင့်တင်သူနှင့် SRF စည်းနှောင်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ (t (4) = 4; p> 0.7) (ပုံ 0.05B ။ ) ။ ဤအချက်သည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆန့်ကျင်။ နာတာရှည်ကိုကင်းမှ osFosB ကို induction SRF မှတဆင့်မဖြည့်ဆည်းပေးကြောင်းဖော်ပြသည်။ နာတာရှည်ကိုကင်းပြီးနောက် ffFosB စုဆောင်းခြင်း Srffl / fl တိရိစ္ဆာန်များတွင် AAV-Cre-GFP နှင့် AAV-GFP နှင့် NAc သို့လက်ခံသောတိရိစ္ဆာန်များတွင်ပြောင်းလဲခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချက်ကိုတိုက်ရိုက်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ SRF ဖျက်မှုဒီ ဦး နှောက်ဒေသ (ပုံ။ 4C) တွင်ကိုကင်း - induFosB စုဆောင်းခြင်းအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
SRF ဆုံးရှုံးΔFosBသို့မဟုတ်ကင်း-စညျးမဉျြးစညျးကမျးအပြုအမူတွေ၏ကင်းသော induction မသက်ရောက်ခဲ့ရသည်။ A, B, ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းထိတွေ့မှု (7 ဃ, 20 / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း-HCl mg) ဒီဦးနှောက်ဒေသ (ခ) 24 ဇပြီးနောက်အတွက် fosB ဗီဇကမကထမှ binding NAc (က) တွင်သို့မဟုတ် SRF အပေါ် SRF ပရိုတိန်းစကားရပ်အပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့ မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု (ဎ =5/ အုပ်စုသည်) ။ ကို C, immunocytochemically တိုင်းတာΔFosBစုဆောင်းခြင်း, နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့အောက်ပါ SRF ၏ NAc-တိကျတဲ့ခေါက်ထွက်နေဖြင့်ထိခိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ : D, E နဲ့, အ NAc ထံမှ SRF ၏ဒေသခံဖျက်မှုကိုလည်းကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုအရေးကြီးတဲ့အပေါ်တစ်ဦးဆားဆေးထိုးအောက်ပါ locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု (ဃ 1) (ဎ = 8 / အုပ်စုတစ်စု) မျှရှိခဲ့တယ် (ဃ 1-7; D:) သို့မဟုတ် ကိုကင်းအပေါ်ရာအရပျ preference ကို (; အီးဎ = 8 / အုပ်စုတစ်စု) အေးစက်။ ပြသဒေတာကို SEM (အမှားအရက်ဆိုင်အဖြစ်ကိုယ်စားပြု) ±ယုတ်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့တွေ့ရှိချက်ကိုလေ့လာဖို့အတွက် NAc မှရွေးချယ်လိုက်တဲ့ SRF ကကိုကင်းကိုအပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများပြောင်းလဲစေသလားဆိုတာကျွန်တော်တို့စုံစမ်းခဲ့တယ်။ ကိုကင်းအားဖြင့် SRF ၏ osFosB induction ကိုစည်းမျဉ်းမရှိခြင်းနှင့်အညီ၊ SRF ၏ NAc- သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထွက်လာမှုသည်ကိုကင်းဓာတ်များထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် (စူးရှသောကိုကင်း (သို့) locomotor sensitization) ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစက်ခေါင်းလှုပ်ရှားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ = 4,80; p> 0.3) (ပုံ 0.05D ။ ) ။ အလားတူစွာ၊ SRF ၏ NAc- သတ်သတ်မှတ်မှတ်ခေါက်ထားသည့်အနေဖြင့်ကိုကင်းအကျိုးကိုသွယ်ဝိုက်တိုင်းတာပေးသောကိုကင်းအားအခြေခံသည့်နေရာအတွက် ဦး စားပေးမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ (t (4) = 14; p> 0.1) (ပုံ - ၄) ။
ဒီလေ့လာမှုကနာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက် NAc အတွက်ΔFosBတစ်ဝတ္ထုအထက်ဖျန်ဖြေအဖြစ် SRF ဖော်ထုတ်နှင့် depressive- နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် SRF implicates ။ ကျနော်တို့နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု, ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပေမယ့်ဒဏ်ခံမဟုတ်တိရစ္ဆာန်များ၏ NAc အတွက် SRF အဆင့်ဆင့်လျော့ကျ, ဤ downregulation ကာကွယ်ပေးသည်ကျနော်တို့ကိုပြသသောဤဦးနှောက်ဒေသအတွက်ΔFosB၏ induction နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းထိရောက်သောများအတွက်လိုအပ်သောကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားများကိုပေးစွမ်း ဆိုလိုသည်မှာခံနိုင်ရည် (Vialou et al ။ , 2010) ။ SRF စကားရပ်များတွင်အလားတူလျှော့ချရေးΔFosB mRNA နှင့်ပရိုတိန်းစကားရပ်ကိုလည်းလျှော့ချခဲ့သည်ဘယ်မှာစိတ်ဓာတ်လူသား NAc အတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, ΔFosBအဆင့်ဆင့်ΔFosBစကားရပ်ကိုထိန်းချုပ်ထားအတွက်အဖြစ်သေးမသိသောအခြားမှတ်တမ်းယန္တရားများ implicates ရာ SRF တစ် downregulation, ရှိနေသော်လည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်များ၏ NAc အတွက်ကိုလျှော့ချမခံခဲ့ရပါ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုကဒီဦးနှောက်ဒေသမှ SRF ၏သွေးဆောင်မျိုးရိုးဗီဇကိုပယ်ဖျက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်ပြီးနောက် NAc အတွက်ΔFosBသော induction ဖြန်ဖြေအတွက် SRF များအတွက်တစ်ဦးကကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အခန်းကဏ္ဍ။ ဒီ NAc-တိကျတဲ့ SRF နှင့်အတူကြွက်များ၏အမူအကျင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခေါက်ထွက်ထပ်မံအခြေခံနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် depression- နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူနှစ်ဦးစလုံး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကစားခြင်းအဖြစ် SRF implicates ။ ဒီကဗျာမတူဘဲ, SRF ဖျက်မှုနာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်မှုဖို့ဒါမှမဟုတ်ကိုကင်းများ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများအပေါ်တုန့်ပြန်ΔFosBသော induction မသက်ရောက်ခဲ့ရသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ΔFosBသော induction နှင့်ကွဲပြားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် SRF များအတွက်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှု-သတ်သတ်မှတ်မှတ်အခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါတယ်။
SRF-mediated ကူးယူယခင်ကအထူးသဖြင့်ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက် (BDNF) (ရမညျ et al ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အဖြစ်တိုးမြှင့် neurotrophic လှုပ်ရှားမှုရန်, အကြီးအကျယ်တိုးလာကယ်လစီယမ်ရောက်လာခြင်းဖြင့်အစပျိုး, Synaptic လှုပ်ရှားမှုတုံ့ပြန်ရန်ပြသခဲ့ပြီး, 1993 ။ Xia et al, 1996; ။ ဂျွန်ဆင် et al, 1997; ။ Chang et al, 2004; ။ Kalita et al, 2006; ။ Knöllနှင့် Nordheim, 2009) ။ ဤသည် SRF နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပေမယ့်ဒဏ်ခံမဟုတ်ကြွက်၏ NAc အတွက် downregulated အဘယ်ကြောင့်၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်မေးစရာများရှိနေပါသည်။ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက် display ကို BDNF ပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် NAc အတွက်မြစ်အောက်ပိုင်း BDNF အချက်ပြအဖြစ် ventral tegmental ဧရိယာ NAc innervate ရာ (VTA) dopamine အာရုံခံ၏တိုးမြှင်ပေါကျကှဲပစ်ခတ်ရန်တိုးတက်သော်လည်းကတည်းကဒါဟာ differential ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, dopamine သို့မဟုတ် BDNF အချက်ပြခြင်းဖြင့်ဖွယ်ရှိကမကထပြုခဲ့ခြင်းမရှိပါ ဒဏ်ခံတိရိစ္ဆာန်များ BDNF အချက်ပြခြင်းနှင့် VTA ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများ (Krishnan et al ။ , 2007) ၏သာမန်အဆင့်ဆင့်ကိုပြသ။ တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်ခြေ (အယ်လ် Vialou et ။ , 2010) differential ဒဏ်ခံကြွက်နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်အတွက်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် SRF စကားရပ်ကျနော်တို့ကိုပြသသောဤဦးနှောက်ဒေသ၏ပြောင်းလဲ glutamatergic innervation တုံ့ပြန် NAc အတွက်နှိမ်နင်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အလုပ်တိုက်ရိုက်ဒီနှင့်အခြားဖြစ်နိုင်ခြေယန္တရားများကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါသည်။
မကြာသေးမှီကမျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်နှင့်အခြားနည်းလမ်းများ အသုံးပြု. လေ့လာမှုများတွင် neuron အတွက် SRF ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇ၏ ~5-10% ချက်ချင်းအစောပိုင်းမျိုးဗီဇ (Philippar et al ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု, 2004; ။ Ramanan et al, 2005; ။ Etkin et al, 2006; ။ Knöllနှင့် Nordheim, 2009) ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုအသုံးပြုပုံΔFosB၏ induction အတွက် SRF များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍသည် fosb ချက်ချင်းအစောပိုင်းမျိုးဗီဇတစ်ခုခြင်းကိုထုတ်ကုန်သရုပ်ပြနှင့်ကိုက်ညီသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာဤအမျိုးမျိုးသောလေ့လာမှုများအတွက်ဖော်ထုတ်မြောက်မြားစွာ SRF ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇလည်း (Kumar က et al, 2005 ။ Renthal et al, 2008, 2009; ။ ဝင်္ et al, 2010 ။ ) NAc အတွက်ΔFosB၏လူသိများပစ်မှတ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ထိုအလေ့စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဗီဇတို့တွင်အာရုံခံ cytoskeleton (ဥပမာ, Cdk5, Arc နှင့် Actb) ကိုထိန်းညှိဖို့လူသိများကြသည်အများအပြားရှိပါတယ်။ ဒီအလှည့်အတွက်, SRF အများအပြားတွင် neuron ဆဲလ်အမျိုးအစားများအတွက် actin ဒိုင်းနမစ်နှင့်အာရုံခံ Motilal သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအစီရင်ခံစာများနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါတယ် (။ Alberti et al, 2005; Ramanan et al, 2005; ။ ။ Knöll et al, 2006), ΔFosBမှလူသိများသည်သော်လည်း NAc အာရုံခံ (ဝင်္ et al ။ , 2010) ၏ dendritic ကျောရိုး outgrowth အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဘုံအလုပ်လုပ်တဲ့ Endpoints အာရုံခံ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်, ရှုပ်ထွေးသောအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ဘုံပစ်မှတ်မျိုးဗီဇတစ်ခုစီးရီးအပေါ်သရုပ်ဆောင်, ΔFosB၎င်း၏သော induction နဲ့ပေါင်းစပ် SRF များ၏တိုက်တွန်းမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများ, ရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။
SRF လည်း Synaptic plasticity နှင့်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု-မှီခိုဗီဇစကားရပ်နှင့်အပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍကစားရန်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဥပမာအား electroconvulsive သိမ်းယူမှုကဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်အာရုံခံ activation ၏ဆန္ဒအလျောက်တူးဖော်ရေး Srf Mutant (Ramanan et al ၏ hippocampus အတွက်ချို့ယွင်းရေရှည် Synaptic အလားအလာနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ဖြစ်စေတုံ့ပြန်ချက်ချင်းအစောပိုင်းမျိုးဗီဇ၏ SRF-မှီခိုသော induction ၏, အရှုံး။ , 2005; Etkin et al, 2006) ။ ။ ထို့အပွငျ hippocampus အတွက် SRF လျော့ကျ (အယ်လ် Etkin et ။ , 2006) တစ်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်၏တူးဖော်ရေးစဉ်အတွင်းရေရှည် Synaptic စိတ်ကျရောဂါတစ်ခုဝတ္ထုအခြေအနေတွင်အားဖြင့်သွေးဆောင်ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇစကားရပ်များနှင့်ချို့ယွင်းလေ့များတွင်လိုငွေပြမှုဖြစ်ပေါ်စေရန်ပြသလျက်ရှိသည်။ အထက်ပါအချက်အလက်များသည်တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုး၏သဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သင့်လျော်စွာလိုက်လျောညီထွေရှိစေရန် SRF ၏အရေးပါမှုသည်အထက်ဖော်ပြပါပတ်ဝန်းကျင်အသစ်သို့လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းကဲ့သို့သောစိတ်ဖိစီးမှုဖိအားများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်းအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုများပေါ်ပေါက်လာခြင်းကိုတားဆီးရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၌ရှိသကဲ့သို့ -induced အမူအကျင့်လိုငွေပြမှု။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် SRF အသုံးအနှုန်းတွင်လိုငွေပြမှုကိုပြသောတိရိစ္ဆာန်များသည်ထိခိုက်လွယ်သူများအတွက်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်မှုစိတ်ဖိစီးမှုကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ SRF ၏တိုက်ရိုက်ခေါက်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ NAc တွင် SRF အဆင့်လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်အတူစိတ်ဓာတ်ကျနေသောလူသားများရှိနေခြင်းကြောင့် SRF သည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏အပြုသဘောဆောင်သည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အပြုသဘောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရာတွင် NAC ရှိ regulFosB ဖော်ပြချက်အားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်အခြေခံကျသည်။
မတူညီသောစက်မှုလယ်ယာ: ဖိစီးကိုခံနိုင်ရည် VS စွဲ
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတစ်ဦးကအံ့သြစရာတွေ့ရှိချက် SRF နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန် NAc အတွက်ΔFosBစုဆောင်းခြင်းများအတွက်လိုအပ်ပေမယ့်, ကနာတာရှည်ကင်းတုံ့ပြန်အတွက်တူညီတဲ့ဦးနှောက်ဒေသအတွင်းΔFosBသော induction ဘို့မလိုအပ်ပါ, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အလားတူပင် SRF မူးယစ်ဆေးမှပုံမှန်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုဘို့မလိုအပ်ပါ။ (။ 1999, Nestler et al; Nestler, 2008) ဤဒေတာΔFosBလှုံ့ဆော်မှုများစွာသောအမျိုးအစားများကိုတုန့်ပြန် NAc အတွက်သွေးဆောင်နေသည်ဟူသောအချက်ကိုရှိနေသော်လည်းကြောင်းပြΔFosBသော induction မှဦးဆောင်ကွဲပြားမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းဖြစ်အဲဒီမှာပေါ်လာပါသည်။ ဤအတွေ့ရှိချက်ဘို့တဖြစ်နိုင်သောရှင်းပြချက်ကိုကင်းနှိုင်းယှဉ်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်ΔFosBစုဆောင်းခြင်းကိုပြသသောတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကွဲပြားခြားနားသောဆဲလ်အမျိုးအစားများဖြစ်ပါသည်။ နာတာရှည်ကင်းအာရုံခံ + D1 အတွင်းအများစုΔFosB induces သော်လည်းနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု, ညီတူညီမျှ NAc အလတ်စား spiny အာရုံခံ၏နှစ်ခုအဓိက subpopulations, D2 dopamine receptors နှိုင်းယှဉ်အများစု D1 ဖော်ပြသူတို့အားအတွင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ΔFosB induces (Kelz et al, 1999; ။ ။ Perrotti et al, 2004) ။ ထို့ကွောငျ့ SRF-မှီခိုလမ်းကြောင်း D2 + အာရုံခံအတွက်ΔFosBသော induction များအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်မည်အကြောင်းဖြစ်နိုင်။ အဆိုပါ induction နှစ်ဦးစလုံးတွင် neuron Subtype ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကတည်းကသို့သော်ဤနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက် SRF ခေါက်ထွက်ကြွက်တွေမှာΔFosBသော induction ၏ပြီးပြည့်စုံသောဆုံးရှုံးမှုကိုရှင်းပြမှာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာရှင်းပြချက်အစောပိုင်းကမှတ်ချက်ပြုအဖြစ်ဖြစ်ကောင်း, ပြောင်းလဲ glutamatergic ဂီယာအားဖြင့်ပြုပြင်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်နာတာရှည်ကင်းအဓိကအား D1 အားဖြင့်ပြုပြင်နှင့်အတူနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်နာတာရှည်ကင်း, NAc အာရုံခံအပေါ်အရေးယူမှုဟာသူတို့ရဲ့ကွဲပြားသည် Modes ၏သီလအသုံးပြုပုံကွဲပြား intracellular အချက်ပြကက်စကိတ်အပေါ်သို့ impinge သောကွောငျ့ဖွစျသညျ အဲဒီ receptor အချက်ပြ (Nestler, 2008) ။ သို့တိုင်အခြားဖြစ်နိုင်ခြေနာတာရှည်ကင်းနှိုင်းယှဉ်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုများကΔFosBသော induction differential ကွဲပြားအာရုံကြောသွင်းအားစုများကထိန်းချုပ်ထားသည်ဟုကွဲပြားမှတ်တမ်းယန္တရားများအပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါတယ်, ဥပမာ, အမျိုးမျိုးသော glutamatergic projection ဒေသများထံမှ prefrontal cortex, hippocampus နှင့် amygdala အတော်ကြာဒေသများအတွက် NAc innervating ။ အများကြီးနောက်ထပ်အလုပ်ကဤနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာစူးစမ်းဖို့လိုအပ်ပါသည်။
အတူတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ΔFosBစိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုမှ proresilience တုံ့ပြန်မှုပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် NAc အတွက်သွေးဆောင်သောမှတစ်ဆင့်တစ်ဝတ္ထုမှတ်တမ်းယန္တရားကိုဖေါ်ထုတ်။ ဒီလေ့လာမှုကလည်း depression- နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် NAc များ၏အဆင့်မှာ SRF နေဖြင့်ကစားအခန်းကဏ္ဍသို့အရေးကြီးသောသစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်ထောက်ပံ့။ ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူများစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင် SRF ၏မှတ်တမ်းအခန်းကဏ္understandingကိုပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်လာခြင်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆိုင်သောရောဂါများကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်မျိုးရိုးဗီဇပစ်မှတ်များအားဖော်ထုတ်ရာတွင်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
ဤလုပ်ငန်းကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်အမျိုးသား Institute ၏အမျိုးသားအင်စတီကျုကနေထောက်ပံ့ငွေအားဖြင့်၎င်း, AstraZeneca အတူသုတေသနမဟာမိတ်အဖွဲ့ကထောက်ခံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ Srffl / FL ကြွက်ပေးဘို့ညျဒါဝိဒျဃ Ginty ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စာပေးစာယူအဲရစ်ဂျေ Nestler, အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ Fishberg ဦးစီးဌာန, ဆေးပညာသိနာတောင်ပေါ်ကျောင်း, တစ်ဦးက Gustave အယ်လ် Levy ရာဌာန, Box ကို 1065, နယူးယောက်, NY 10029-6574 မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
မူပိုင်ခွင့်© 2010 စာရေးသူ 0270-6474 / 10 / 3014585-08 $ 15.00 / 0
1 ။ ↵
1 ။ Alberti S က,
2 ။ Krause သည် SM,
3 ။ Kretz အို
4 ။ Philippar ဦး,
5 ။ Lemberger T က,
6 ။ မြာပွေအီး,
7 ။ Wiebel FF,
8 ။ Schwarz H ကို,
9 ။ Frotscher M က,
10 ။ Schütz, G,
11 ။ Nordheim တစ်ဦးက
အဆိုပါ murine rostral ရွှေ့ပြောင်းစီးအတွက် (2005) အာရုံခံရွှေ့ပြောင်းသွေးရည်ကြည်တုံ့ပြန်မှုအချက်လိုအပ်သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 102: 6148-6153 ။
2 ။ ↵
1 ။ ရမညျ H ကို,
2 ။ Ginty DD,
3 ။ Greenberg ME
ကွဲပြားကယ်လစီယမ်အချက်ပြလမ်းကြောင်းအားဖြင့် hippocampal အာရုံခံအတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်၏ (1993) စည်းမျဉ်းဥပဒေ။ သိပ္ပံ 260: 181-186 ။
3 ။ ↵
1 ။ Berton အို
2 ။ McClung, CA,
3 ။ Dileone RJ,
4 ။ Krishnan V ကို,
5 ။ Renthal W က,
6 ။ Russo SJ,
7 ။ ဂရေဟမ်: D,
8 ။ Tsankova မိုင်,
9 ။ Bolanos, CA,
10 ။ Rios M က,
11 ။ Monteggia LM,
12 ။ ကိုယ်ပိုင် DW,
13 ။ Nestler EJ
လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုအတွက် mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်းအတွက် BDNF ၏ (2006b) မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံ 311: 864-868 ။
4 ။ ↵
2 ။ Covington HE 3rd ။ ,
3 ။ Ebner K သည်,
4 ။ Tsankova မိုင်,
5 ။ Carl TL,
6 ။ Ulery P ကို,
7 ။ Bhonsle တစ်ဦးက,
8 ။ Barrot M က,
9 ။ Krishnan V ကို,
10 ။ Singewald GM က,
11 ။ Singewald N ကို,
12 ။ Birnbaum က S,
13 ။ Neve RL,
14 ။ Nestler EJ
စိတ်ဖိစီးမှုအားဖြင့် periaqueductal မီးခိုးရောင်အတွက်ΔFosB၏ (2007) induction တက်ကြွဖြေရှင်းတုံ့ပြန်မှုကိုအားပေးအားမြှောက်။ အာရုံခံဆဲလျ 55: 289-300 ။
5 ။ ↵
1 ။ Chang SH,
2 ။ Poser S က,
3 ။ Xia Z ကို
အာရုံခံရှင်သန်မှုအတွက်သွေးရည်ကြည်တုံ့ပြန်မှုအချက်အဘို့ (2004) တစ်ဦးကဝတ္ထုရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို neuroscience 24: 2277-2285 ။
6 ။ ↵
1 ။ Etkin တစ်ဦးက,
2 ။ Alarcón JM,
3 ။ Weisberg SP,
4 ။ Touzani K သည်,
5 ။ Huang က YY,
6 ။ Nordheim တစ်ဦးက,
7 ။ Kandel ER
(2006) SRF များအတွက်သင်ယူတစ်အခန်းကဏ္ဍ: ဖျက်မှုကိုအရွယ်ရောက်သူ forebrain အတွက်, LTD နှင့်ဝတ္ထုအခြေအနေတွင်၏ချက်ချင်းမှတ်ဉာဏ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်း disrupts ။ အာရုံခံဆဲလျ 50: 127-143 ။
7 ။ ↵
1 ။ Heinz HJ,
2 ။ Heldmann M က,
3 ။ Voges J ကို,
4 ။ Hinrichs H ကို,
5 ။ Marco-Pallares J ကို,
6 ။ Hopf JM,
7 ။ Muller UJ,
8 ။ Galazky ငါ
9 ။ Sturm V ကို,
10 ။ Bogerts B က,
11 ။ Münte TF
(2009) ကနျူကလိယ၏နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွ အသုံးပြု. အကြီးအကျယ်အရက်မှီခိုအတွက်မက်လုံးပေးာင်း Counteracting accumbens: လက်တွေ့နှင့်အခြေခံသိပ္ပံရှုထောင့်။ တပ်ဦး Hum neuroscience 3: 22 ။
8 ။ ↵
1 ။ ဂျွန်ဆင် CM,
2 ။ ဟေးလ် CS,
3 ။ Chawla S က,
4 ။ Treisman R ကို,
5 ။ ရမညျ H ကို
(1997) ကယ်လ်ဆီယမ်အဆငျ့ဆငျ့အချက်ပြလွတ်လပ်စွာ Ras / mitogen-activated ပရိုတိန်း kinases (ERKs) ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနိုငျကွောငျးသုံးကွဲပြားလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်ကိုထိန်းချုပ်ထား။ J ကို neuroscience 17: 6189-6202 ။
9 ။ ↵
1 ။ Kalita K သည်,
2 ။ Kharebava, G,
3 ။ Zheng JJ,
4 ။ Hetman M က
သွေးရည်ကြည်တုံ့ပြန်မှု BDNF အားဖြင့်အချက်-မောင်းနှင်ကူးယူသို့မဟုတ်တိုးလာ Synaptic လှုပ်ရှားမှု ERK2006 / 1-မှီခိုဆွအတွက် megakaryoblastic စူးရှသောသွေးကင်ဆာ-1 ၏ (2) အခန်းက္ပ။ J ကို neuroscience 26: 10020-10032 ။
10 ။ ↵
1 ။ Kelz ကို MB,
2 ။ Chen က J ကို,
3 ။ Carlezon WA ဂျူနီယာ,
4 ။ Whisler K သည်,
5 ။ Gilden L ကို,
6 ။ Beckmann လေး,
7 ။ Steffen ကို C,
8 ။ Zhang က YJ,
9 ။ Marotti L ကို,
10 ။ ကိုယ်ပိုင် DW,
11 ။ Tkatch T က,
12 ။ Baranauskas, G,
13 ။ Surmeier DJ သမား,
14 ။ Neve RL,
15 ။ Duman RS,
16 ။ Picciotto MR,
17 ။ Nestler EJ
ဦးနှောက်ထဲမှာကူးယူအချက်ΔFosB၏ (1999) Expression ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝတရား 401: 272-276 ။
11 ။ ↵
1 ။ Knöll B က,
2 ။ Nordheim တစ်ဦးက
အဆိုပါ SRF ပါရာဒိုင်း: အာရုံကြောစနစ်အတွက်ကူးယူအချက်များ (က 2009) Functional ဘက်စုံသုံး။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience 32: 432-442 ။
12 ။ ↵
2 ။ Kretz အို
3 ။ Fiedler ကို C,
4 ။ Alberti S က,
5 ။ Schütz, G,
6 ။ Frotscher M က,
7 ။ Nordheim တစ်ဦးက
(2006) Serum တုံ့ပြန်မှုအချက်အဆိုပါ hippocampus အတွက်အာရုံခံတိုက်နယ်စည်းဝေးပွဲထိန်းချုပ်သည်။ နတ် neuroscience 9: 195-204 ။
13 ။ ↵
1 ။ Krishnan V ကို,
2 ။ ဟန် MH,
3 ။ ဂရေဟမ် DL,
4 ။ Berton အို
7 ။ Laplant မေး,
8 ။ ဂရေဟမ်တစ်ဦးက,
9 ။ Lutter M က,
10 ။ Lagace, DC,
11 ။ Ghose S က,
12 ။ Reister R ကို,
13 ။ Tannous P ကို,
14 ။ အစိမ်းရောင်က TA,
15 ။ Neve RL,
16 ။ Chakravarty S က,
17 ။ Kumar ကတစ်ဦး,
18 ။ Eisch AJ,
19 ။ ကိုယ်ပိုင် DW,
20 ။ Lee က FS,
21 ။ et al ။
ဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသများတွင်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်ခြင်းနှင့်ခုခံရေးအခြေခံ (2007) မော်လီကျူးအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်။ cell 131: 391-404 ။
14 ။ ↵
1 ။ Kuhn J ကို,
2 ။ Bauer R ကို,
3 ။ Pohl က S,
4 ။ Lenartz: D,
5 ။ Huff W က,
6 ။ ကင်မ် Eh,
7 ။ Klosterkoetter J ကို,
8 ။ Sturm V ကို
နျူကလီးယပ် accumbens ၏နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွပြီးတဲ့နောက်အကူအညီမပေးဘဲဆေးလိပ်သောက်ရပ်နားခြင်းအပေါ် (2009) လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ။ EUR စွဲ Res 15: 196-201 ။
15 ။ ↵
1 ။ Kumar ကတစ်ဦး,
2 ။ Choi KH,
3 ။ Renthal W က,
5 ။ Theobald DE,
6 ။ Truong HT,
7 ။ Russo SJ,
8 ။ Laplant မေး,
9 ။ Sasaki TS,
10 ။ Whistler KN,
11 ။ Neve RL,
(2005) Chromatin ပြုပြင် striatum အတွက်ကင်း-သွေးဆောင် plasticity အခြေခံအဓိကယန္တရားသည်။ အာရုံခံဆဲလျ 48: 303-314 ။
16 ။ ↵
1 ။ ဝင်္ငါ
3 ။ Dietz DM,
4 ။ LaPlant မေး,
7 ။ စက်ပြင် M က,
8 ။ Mouzon အီး,
9 ။ Neve RL,
10 ။ Haggarty SJ,
11 ။ Ren Y ကို,
12 ။ Sampath SC,
13 ။ Hurd YL,
14 ။ Greengard P ကို,
15 ။ Tarakhovsky တစ်ဦးက,
16 ။ Schaefer တစ်ဦးက,
ကိုကင်း-သွေးဆောင် plasticity အတွက် histone methyltransferase G2010a ၏ (9) မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံ 327: 213-216 ။
17 ။ ↵
1 ။ McClung, CA,
2 ။ Ulery PG,
3 ။ Perrotti LI,
4 ။ Zachary V ကို,
5 ။ Berton အို
6 ။ Nestler EJ
(2004) DeltaFosB: ဦးနှောက်အတွက်ရေရှည်လိုက်လျောညီထွေများအတွက်မော်လီကျူး switch သည်။ ဦးနှောက် Res Mol ဦးနှောက် Res 132: 146-154 ။
18 ။ ↵
1 ။ Nestler EJ
စွဲလမ်း၏ (2008) မှတ်တမ်းယန္တရားများ: deltaFosB ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ 363: 3245-3255 ။
19 ။ ↵
1 ။ Nestler EJ,
2 ။ Carlezon WA ဂျူနီယာ
(2006) စိတ်ကျရောဂါအတွက် mesolimbic dopamine ဆုလာဘ် circuit ကို။ ဟားဗတ် 59: 1151-1159 ။
20 ။ ↵
2 ။ Kelz ကို MB,
3 ။ Chen က J ကို
(1999) ΔFosB: ရေရှည်အာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့် plasticity တစ်ဦးမော်လီကျူးဖျန်ဖြေ။ ဦးနှောက် Res 835: 10-17 ။
21 ။ ↵
1 ။ နယူတန်အက်စ်အက်စ်,
2 ။ Thome J ကို,
3 ။ Wallace TL,
4 ။ Shirayama Y ကို,
5 ။ Schlesinger L ကို,
6 ။ Sakai က N ကို,
7 ။ Chen က J ကို,
8 ။ Neve R ကို,
9 ။ Nestler EJ,
10 ။ Duman သည် RS
နျူကလီးယပ်အတွက်စခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်းသို့မဟုတ် dynorphin ၏ (2002) တားစီးလက္ခဏာတူသောအကျိုးသက်ရောက်ထုတ်လုပ် accumbens ။ J ကို neuroscience 22: 10883-10890 ။
22 ။ ↵
1 ။ Nikulina EM,
2 ။ Arrillaga -Romany အဘိဓါန်ငါ
3 ။ Miczek Ka,
4 ။ တူ RP ဂျူနီယာ
mu-opioid အဲဒီ receptor mRNA နှင့် FosB / DeltaFosB immunoreactivity အချိန်သင်တန်း: ကြွက်များတွင်ထပ်ခါတလဲလဲလူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက် mesocorticolimbic အဆောက်အဦများအတွက် (2008) Long-တည်မြဲအပြောင်းအလဲတချို့။ EUR J ကို neuroscience 27: 2272-2284 ။
23 ။ ↵
1 ။ Perrotti LI,
2 ။ Hadeishi Y ကို,
3 ။ Ulery PG,
4 ။ Barrot M က,
5 ။ Monteggia L ကို,
6 ။ Duman RS,
7 ။ Nestler EJ
နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာΔFosB၏ (2004) induction ။ J ကို neuroscience 24: 10594-10602 ။
24 ။ ↵
2 ။ ရက်ကန်း RR,
3 ။ Robison B က,
4 ။ Renthal W က,
5 ။ ဝင်္ငါ
6 ။ Yazdani S က,
7 ။ Elmore RG,
8 ။ Knapp DJ သမား,
9 ။ Selley DE,
10 ။ မာတင် BR,
11 ။ sim-Selley L ကို,
12 ။ Bachtell RK,
13 ။ ကိုယ်ပိုင် DW,
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ DeltaFosB သော induction ၏ (2008) ထူးခြားသောပုံစံများ။ synapses 62: 358-369 ။
25 ။ ↵
1 ။ Philippar ဦး,
2 ။ Schratt, G,
3 ။ Dieterich ကို C,
4 ။ Muller JM,
5 ။ Galgóczy P ကို,
6 ။ အိန်ဂျယ် FB,
7 ။ Keating MT,
8 ။ Gertler က F,
9 ။ Schüle R ကို,
10 ။ Vingron M က,
(2004) က SRF ပစ်မှတ်ဗီဇ Fhl2 SRF ၏ RhoA / mal-မှီခို activation antagonizes ။ Mol ဆဲလ် 16: 867-880 ။
26 ။ ↵
1 ။ Ramanan N ကို,
2 ။ Shen Y ကို,
3 ။ Sarsfield S က,
4 ။ Lemberger T က,
6 ။ Linden DJ သမား,
7 ။ Ginty DD
(2005) SRF လှုပ်ရှားမှု-သွေးဆောင်ဗီဇစကားရပ်နှင့် Synaptic plasticity ပေမယ့်အာရုံခံမဟုတ်ရှင်သန်နိုင်စွမ်း mediates ။ နတ် neuroscience 8: 759-767 ။
27 ။ ↵
1 ။ Renthal W က,
2 ။ Carl TL,
3 ။ ဝင်္ငါ
4 ။ Covington HE 3rd ။ ,
5 ။ Truong HT,
6 ။ Alibhai ငါ
7 ။ Kumar ကတစ်ဦး,
8 ။ Montgomery RL,
9 ။ Olson မာခ်,
10 ။ Nestler EJ
(2008) မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့ပြီးနောက်က c-fos ဗီဇ၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု desensitization mediates ။ J ကို neuroscience 28: 7344-7349 ။
28 ။ ↵
2 ။ Kumar ကတစ်ဦး,
3 ။ Xiao, G,
4 ။ Wilkinson က M,
5 ။ Covington HE 3rd ။ ,
6 ။ ဝင်္ငါ
7 ။ Sikder: D,
8 ။ Robison AJ,
9 ။ LaPlant မေး,
10 ။ Dietz DM,
11 ။ Russo SJ,
12 ။ Vialou V ကို,
13 ။ Chakravarty S က,
14 ။ Kodadek တီဂျေ,
15 ။ တစ်ဦးကသီးနှံများကိုပုံ,
16 ။ Kabbaj M က,
ကိုကင်းများက chromatin စည်းမျဉ်းများ (2009) ဂြီနို-ကျယ်ပြန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ sirtuins များအတွက်အခန်းကဏ္ဍဖော်ပြသည်။ အာရုံခံဆဲလျ 62: 335-348 ။
29 ။ ↵
1 ။ Schlaepfer TE,
2 ။ Cohen ကို MX,
3 ။ Frick ကို C,
4 ။ Kosel M က,
5 ။ Brodesser: D,
6 ။ Axmacher N ကို,
7 ။ ဂျိုး AY,
8 ။ Kreft M က,
9 ။ Lenartz: D,
10 ။ Sturm V ကို
(2008) circuitry ဆုချသည်နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွဆန့်ကျင်ဘက်အဓိကစိတ်ကျရောဂါအတွက် anhedonia လျော့ချ။ Neuropsychopharmacology 33: 368-377 ။
30 ။ ↵
1 ။ Sesack SR,
2 ။ ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို
(2010) Cortico-Basal ganglia ဆုလာဘ်ကွန်ယက်ကို: microcircuitry ။ Neuropsychopharmacology 35: 27-47 ။
31 ။ ↵
1 ။ Tomita H ကို,
2 ။ Vawter အမတ်,
3 ။ Walsh DM,
4 ။ အီဗန် SJ,
5 ။ Choudary PV,
6 ။ Li က J ကို,
7 ။ Overman KM,
8 ။ ME Atz,
9 ။ Myers RM,
10 ။ ဂျုံးစ်ဥပမာ
11 ။ Watson ဟာ SJ,
12 ။ Akil H ကို,
13 ။ Bunney WE ဂျူနီယာ
မျိုးဗီဇစကားရပ်ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်ရောကျသောနှင့် postmortem အချက်များ (က 2004) Effect: microarray အတွက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုလူ့ဦးနှောက်ကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးသို့မဟုတ် postmortem ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 55: 346-352 ။
32 ။ ↵
1 ။ Tsankova မိုင်,
2 ။ Berton အို
4 ။ Kumar ကတစ်ဦး,
5 ။ Neve RL,
(2006) စိတ်ကျရောဂါနှင့်လက္ခဏာလုပ်ဆောင်ချက်မောက်မော်ဒယ်အတွက် hippocampal chromatin စည်းမျဉ်းထောက်မ။ နတ် neuroscience 9: 519-525 ။
33 ။ ↵
1 ။ Vassoler FM ရေ,
2 ။ Schmidt က HD ကို,
3 ။ , ME Gerard
4 ။ နာမည်ကြီး KR,
5 ။ Ciraulo DA,
6 ။ Kornetsky ကို C,
7 ။ Knapp CM,
8 ။ ပီယပ် RC
(2008) ကနျူကလိယ၏နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွ shell ကိုကြွက်များတွင်ရှာကြံမူးယစ်ဆေးများကင်း Prime-သွေးဆောင် reinstatement attenuates accumbens ။ J ကို neuroscience 28: 8735-8739 ။
34 ။ ↵
1 ။ Vialou V ကို,
2 ။ Robison AJ,
3 ။ Laplant QC,
5 ။ Dietz DM,
6 ။ Ohnishi yn,
7 ။ Mouzon အီး,
8 ။ AJ 3rd အလျင်စလို။ ,
9 ။ watts EL,
10 ။ Wallace DL,
11 ။ Iñiguez SD က,
12 ။ Ohnishi YH,
13 ။ Steiner MA,
14 ။ Warren BL,
15 ။ Krishnan V ကို,
16 ။ Bolaños, CA,
17 ။ Neve RL,
18 ။ Ghose S က,
19 ။ Berton အို
20 ။ Tamminga, CA,
21 ။ Nestler EJ
ဦးနှောက်အကြိုးကိုဆားကစ်အတွက် (2010) ΔFosBစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုမှခံနိုင်ရည် mediates ။ နတ် neuroscience 13: 745-752 ။
35 ။ ↵
1 ။ Wilkinson ကို MB,
2 ။ Xiao, G,
3 ။ Kumar ကတစ်ဦး,
6 ။ Sikder: D,
7 ။ Kodadek တီဂျေ,
8 ။ Nestler EJ
(2009) Imipramine ကုသမှုနှင့်ခံနိုင်ရည်အဓိကဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသတွင်အလားတူ chromatin စည်းမျဉ်းပြ။ J ကို neuroscience 29: 7820-7832 ။
36 ။ ↵
1 ။ Xia Z ကို,
2 ။ Dudek H ကို,
3 ။ Miranti CK,
4 ။ Greenberg ME
အဆိုပါ NMDA အဲဒီ receptor မှတဆင့် (1996) ကယ်လ်ဆီယမ်ဝင်လာနေတဲ့ MAP kinase / ERK-မှီခိုယန္တရားအားဖြင့်ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇကူးယူဖြစ်ပေါ်သည်။ J ကို neuroscience 16: 5425-5436 ။